ဆွီဒင်နှင့် ပတ်သက်. အမေရိကသတင်းများ: ဆွီƛ | Apg29
သေးငယ်တဲ့ Microsystems ကိုအတူဆိုင်
: America မှာ Walter Gildersleeve သူ NBC သတင်းဆွီဒင်အပေါ်ဤအစီရင်ခံစာရေးသားခဲ့သည်ရှိပါတယ် NBC သတင်းဒီဇင်ဘာလ 26, 2018. အပေါ်အမျိုးမျိုးသောအစီရင်ခံစာများစကားကိုနားထောငျ
အဆိုပါချစ်ပ် key ကိုကတ်များ, ရထားလမ်းကတ်များနှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်အစားထိုး, များသောအားဖြင့် In-ဧရိယာဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆန်ဘောဇဉ်၏အရွယ်အစားနှင့်နီးစပ်သူဖြစ်ပြီးလက်မနှင့်လက်ညှိုးကြားကအရေပြားအောက်တွင်ထဲထညျ့ဖြစ်ပါတယ်။ (ဗျာ 13း16)
ဒါကြောင့်များစွာသောလူကုမ္ပဏီ၏ဒီ chip ကိုရရှိရန်ဆုတောင်းပဌနာသူတွေကိုမ bearing ရှိပါတယ်ဒီမိုက်ခရိုချစ်ပ်, ရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
ဒါကအခုအမေရိကနှင့်အတူလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာသူကအမေရိကားထိပါလိမ့်မယ်။ ငါချစ်ပ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်ခုလုံးကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အခြားသူများလျှောက်ထားရန်မယ့်ကောင်းသောအရာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ chip ကိုမွေးမြူဖို့စတင်?
အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ: ကျနော်တို့ဟာခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ
အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ: ယုံကြည်သူများအဖြစ်ငါတို့သည်လည်းဤရွေးချယ်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ခံရဖို့များပါတယ်! သို့သော် Up ကိုကျမ်းစာစာဖတ်သူများအဖြစ်။ 13: 11-18 နှင့် Up ကို။ 14: 9-13 တစ်ဦးတည်းသာရှေးခယျြမှုဖြစ်ပါသည်: မရှိသေးပါ!
သို့သော်လည်းသခင်ဘုရားအဆုံးတိုင်အောင်, ဧကန်အမှန်ဤအဖြစ်ပျက်ဖို့ဘို့လမ်းကိုပြင်ဆင်လော့မည်, ကြှနျုပျတို့အားလုံးနှင့်အတူဖြစ်ကတိပြုခဲ့သည်။
"သောကြောင့်သင်သည်ငါ၏သည်းခံခြင်း၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမစောင့်, ငါမြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူထားရန်ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာရောက်လတံ့သော, သင်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးစုံစမ်းရာကာလတွင်ထဲကသင်တို့ကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်။ " Up ကို။ 3:10
Vecka 21, fredag 24 maj 2019 kl. 13:31